I-Worldbox pc - ibhokisi lomhlaba le-PC [lwe-Windows 10, 8, 7 ne-Mac]
Mashi 13, 2021 ngu Umhlahlandlela Wokuqondisa Shiya umbono
1 Landa i-Worldbox For PC Windows xp / 7/8 / 8.1 / 10 (32 kancane - 64 kancane) Mahhala
1.1 I-WorldBox – Sandbox God Simulator Landa i-PC Windows 7 /IWindows 8 / Windows 10 Mahhala
1.2 Izici ze-WorldBox – Uhlelo lokusebenza lweSandbox God Simulator lwePC PC
2 Ungayilanda Kanjani futhi uyifake i-WorldBox – I-Sandbox God Simulator ku-PC Windows 10/8.1/8/7 ne-Mac?
3 Ungayilanda Kanjani futhi Uyifake I-Worldbox ye-PC (lwe-Windows 10/8/7 & mac)? Okokufundisa Kwevidiyo
Landa i-Worldbox For PC Windows xp / 7/8 / 8.1 / 10 (32 kancane - 64 kancane) Mahhala
Abafana!! Uma ungenalo nhlobo ulwazi lokuthi ungayisebenzisa kanjani i- I-WorldBox – Sandbox uNkulunkulu Simulator kwi-PC yakho yeWindows 10/8/8.1/7, uma kunjalo ke lesi yisihloko sakho.
Kulesi sihloko, ungabona ukuthi ungalanda kanjani futhi ufake ifayili le- I-WorldBox – I-Sandbox God Simulator Ye-PC, Ikhompyutha ephathekayo, kanye nedeskithophu ngoba mahhala.
Indlela yesinyathelo ngesinyathelo, Ngichazile ukulanda nokufaka ifayela le- I-Worldbox For PC Windows 7, lwe-Windows 8, lwe-Windows 8.1, kanye neWindows 10 (32 kancane - 64 kancane).
Manje, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download WorldBox – I-Sandbox God Simulator Ye-PC (lwe-Windows 10, 8, 7 ne-Mac) Ake sikubheke…
I-WorldBox – Sandbox God Simulator Thwebula Okwe-PC Windows 7 /IWindows 8 / Windows 10 Mahhala
I-WorldBox – I-Sandbox God Simulator iphumile manje ku-IOS, U-ANDROID, kanye ne-PC. I-Worldbox inguNkulunkulu omkhulu we-simulator nomdlalo we-sandbox. Dala umhlaba wakho bese uba nguNkulunkulu!
Ku- I-WorldBox – Sandbox uNkulunkulu Simulator you can build your personal world and fill it with life.
Dala izidalwa ezahlukahlukene: izimpisi, ama-orcs, abantu, izimvu, kuncane, ngisho namaDragons noma i-UFO! Buka ukuthi impucuko iqhubeka kanjani futhi ixhumana kanjani.
Ungasebenzisa amandla akho ukubhubhisa. Qala imililo, ukuzamazama komhlaba, izinkanyamba, qalisa ama-meteorites! Konke kukuwe!
Uhlelo lokusebenza I-WorldBox – Sandbox uNkulunkulu Simulator
Kubuyekezwe 6 Disemba 2020
Inguqulo Yamanje 0.6.188
Inguqulo ye-Android esekelwayo
5.0 futhi Phezulu
Izici ze-WorldBox – Uhlelo lokusebenza lweSandbox God Simulator lwePC PC
I-Worldbox Simple & Ukulanda okusheshayo!
Inguqulo yakamuva ye-Worldbox!
Izinhlobonhlobo ezinkulu zezikhali
Ungayilanda Kanjani futhi uyifake i-WorldBox – I-Sandbox God Simulator ku-PC Windows 10/8.1/8/7 ne-Mac?
Kusukela manje, alukho uhlelo olusemthethweni noma isoftware yeWorldbox eyenzelwe iWindows PC. The only way to install Worldbox on a Windows computer is by using an Android emulator.
Kunezindlela ezimbili zokufaka i-Worldbox ku-PC:
Landa futhi ufake i-Worldbox ku-PC usebenzisa i-BlueStacks App Player
Landa futhi ufake i-Worldbox ku-PC usebenzisa i-Nox App Player
Izinyathelo zokulanda nokufaka i-Worldbox ye-PC Usebenzisa ama-Bluestacks:
Okokuqala nje, Landa ifayela le- BlueStacks emulator bese ufaka ifayili le-Bluestacks 4.exe ku-PC yakho noma kwi-laptop.
Lapho usufake ama-Bluestacks 4 i-emulator, sicela ungene ngemvume nge-akhawunti yakho yakwa-Google kuma-Bluestacks 4.
Manje usungalanda ngqo futhi ufake i-Worldbox kusuka ku-Google Play Isitolo usebenzisa ama-Bluestacks 4 uhlelo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza lwe-Worldbox luzofakwa emizuzwini embalwa, futhi ungaqala ukusebenzisa iJoox Player.
Izinyathelo zokulanda nokufaka i-Worldbox ye-PC Usebenzisa isidlali sohlelo lokusebenza se-Nox :
Manje sesha i-Worldbox App.
Faka uhlelo lokusebenza lwe-Worldbox ku-emulator yakho ye-Nox
Ngemuva kokuqedwa kokufakwa, uzokwazi ukusebenzisa i-Worldbox App ku-PC yakho.
Ungayilanda Kanjani futhi Uyifake I-Worldbox ye-PC (lwe-Windows 10/8/7 & mac)? Okokufundisa Kwevidiyo
Siyabonga ngokufunda le ndatshana, Ngiyethemba uyayithanda futhi nakanjani izokusiza landa i-Worldbox App yeWindows ne-Mac. Namanje, Uma unemibuzo mayelana okufanayo, bese uhlanganyela ngomusa ku- ibhokisi lokuphawula. Ngaphezu kwalokho, ufuna ezinye izinto, unganqikazi ukungithinta. Ngijabule njalo ukukusiza.
TinyTake For PC Windows 10/8/7 - Thwebula Khulula Inguqulo Yamuva
MakeMKV For PC Windows 10/8/8.1/7 - Thwebula Khulula Inguqulo Yamuva
Landa i-Directv App ye-PC Windows 10, 8 & 7
Ukuqoshwa kwe-DU Kwe-PC, Ukulanda iMac neWindows
I-Privazer Ye-PC yeWindows 10/8/8.1/7 - Landa inguqulo yakamuva
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Umakiwe Nge: games like worldbox for pc, worldbox for pc download, worldbox for pc free download, worldbox pc vs mobile